के तपाईंलाई आफ्नो कानूनी स्थितिमा कानुनी सल्लाह चाहिन्छ?
के तपाई निजी व्यक्ति हुनुहुन्छ? के तपाईंलाई कानुनी सल्लाह चाहिन्छ र के तपाईं आफ्नो कानूनी स्थितिमा स्पष्ट अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ। Law & More केस स्क्यानको माध्यमबाट कानुनी सल्लाहको सम्भावना प्रदान गर्दछ। यो तपाईले हामीलाई बुझाउनु भएको प्रश्नको पृष्ठभूमिमा अनुसन्धान हो। यसले स्पष्ट पार्छ कि के पहिले नै व्यवस्था गरिएको छ वा के अझै पनी छ, जहाँ ब्याजको अ lie्कहरू छन् र कुन समाधानहरू सम्भव छन्। प्रत्येक असाइनमेन्ट आफ्नै मा खडा हुन्छ र एक उचित दृष्टिकोण दिइएको छ। तपाईको कानुनी स्थितिलाई विशेषज्ञद्वारा जाँच गर्नका लागि तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ।
तपाईंको कानुनी स्थिति बारे प्रश्नहरू?
तपाईं अनलाइन आवेदन फारम प्रयोग गरेर केस स्क्यानका लागि अनुरोध सबमिट गर्नुहोस्। हामीले अनुरोध प्राप्त गरेपछि हामी तपाईंलाई फोनबाट सम्पर्क गर्नेछौं। आपसी सम्झौता र कार्य करारमा हस्ताक्षर गरेपछि, हामी केस स्क्यानबाट शुरू गर्नेछौं। सान्दर्भिक तथ्यहरू र कानूनी स्रोतहरूको आधारमा, कानुनी अवस्था र जोखिमहरूलाई ठीकसँग विश्लेषण गरिनेछ। विश्लेषण पछि, हामी एक लिखित सल्लाह बनाउँदछौं, जहाँ हाम्रो विचारहरू सल्लाह कसरी गठन गरियो भनेर अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। यसले संभावनाहरू छलफल गर्दछ र सफलता दर आकलन गर्दछ। केस स्क्यानको नतीजा २ देखि pages पृष्ठहरूको रिपोर्टमा परिणाम दिन्छ। यो सल्लाह बुझ्ने भाषामा लेखिएको छ, व्यावहारिक रूपमा कार्य योग्य र सीधा लागू योग्य। केस स्क्यानको आधारमा तपाईं कुन कार्यहरू लिने चाहानुहुन्छ र कुन खतरालाई तपाईं हटाउन वा सकेसम्म सीमित गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
Law & More केस स्क्यानका लागि अनुरोध प्रदान गर्न बाध्य छैन। केही अवस्थाहरूमा हामी केस स्क्यान गर्न अस्वीकार गर्न सक्दछौं, उदाहरण को लागी यदि यो हाम्रो सेवाहरूको दायरा बाहिर पर्दछ।
चरण-देखि-चरण योजना: एक हप्ता भित्र तपाईंको स्क्यान
सूची पछि, हामी तपाईंलाई टेलिफोनबाट सम्पर्क गर्नेछौं। हामी एउटा सम्झौताको माध्यमबाट स्क्यानमा काम गर्न सुरु गर्दछौं। Law & More केस स्क्यानका लागि प्रत्येक अनुरोध प्रदान गर्न बाध्य छैन
परिस्थितिलाई प्रासंगिक तथ्यहरू र कानूनी स्रोतहरूको आधारमा म्यापि। गरिनेछ र तपाईंले एक सल्लाहकार रिपोर्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ
तपाईंको कानूनी स्थिति एक सल्लाहकारी रिपोर्ट को माध्यम द्वारा स्पष्ट तर्क संग काम गरीन्छ। यो सल्लाह व्यावहारिक र तुरून्त लागू हुन्छ
स्क्यानको आधारमा, तपाई कुन कार्यहरू लिन चाहानुहुन्छ निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई फलो-अप प्रक्रियामा मार्गदर्शन गर्न सक्दछौं
"संग सम्पर्क Law & More शुरुदेखि नै अत्यन्त सकारात्मक र धेरै पेशेवर थियो "
केस स्क्यानको निश्चित दर, स्पष्ट प्रस्ताव र एक अर्डर कन्फर्मेसन हुन्छ। तपाइँलाई गतिविधिहरूको ठ्याक्कै मूल्य थाहा छ Law & More तपाइँको लागि प्रदर्शन गर्दछ। केस स्क्यानको लागि शुल्क hour 750० प्रति घण्टा २१% भ्याट् बाहेक।
कृपया नोट गर्नुहोस्! Law & More कानूनी सहायता परिषद्को सदस्य छैन, यसको मतलब यो छ कि तपाईंसँग अनुदानित कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने विकल्प छैन।
अधिक जटिल वा विस्तृत स्क्यानको लागि अतिरिक्त शुल्क लागू हुन्छ। अवश्य पनि, दर तपाईंसँग पहिले नै सहमत हुनेछ।
हामी तपाईंलाई सल्लाह लागू गर्न र तपाईंलाई आवश्यक कार्यहरू गर्न सहयोग पुर्‍याउन सहयोग गर्न खुसी छौं। होईन, तपाईं केस स्क्यानको परिणाम स्वरूप अर्को कदम चाल्न बाध्य हुनुहुन्न। सम्भावित अनुगमन क्रियाकलापहरू केस स्क्यानको परिणाम स्वरूप हुनेछ - यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने - अनुक्रमिक असाइनमेन्टमा राखिनेछ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि केस स्क्यान केवल सूचक उद्देश्यको लागि हो, यसबाट कुनै अधिकार दावी गर्न सकिदैन। हाम्रो सामान्य नियम र सर्तहरू हाम्रो सेवाहरूमा लागू हुन्छन्।
यदि तपाईं उद्यमी हुनुहुन्छ र तपाईंसँग कानुनी मुद्दा छ भने, हामी तपाईंलाई सेवाको अन्य प्रकारमा सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं। के तपाईंको कुनै प्रश्न छन्? कृपया वकिलहरुलाई सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More.